Siilaanyo oo walaacsan mideynta ciidanka Soomaaliya! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Siilaanyo oo walaacsan mideynta ciidanka Soomaaliya!
19th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka gooni u goosadka ee Somaliland, Axmed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa muujiyey walaaca uu ka qabo in la dhiso ciidan mideysan oo ay yeelayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Siilaanyo shalay khudbad ka jeediyey xuska waxa Somaliland ugu yeerto maalinta ay ka go’day Soomaaliya oo ku beegan 18-ka May ayuu ku sheegay in madaxda Soomaaliya doonayaan iney ciidankaas ku mideeyaan Soomaaliya oo dhan.
“Waxan ognahay in dhawaanahan la wado hindise ciidammo loogu dhisayo Somalia, kuwaasoo ay dalal ka mida Beesha Caalamku ku garab siinayaan. Madaxda Somalia ayaa iyaguna ku celceliya in ay ciidammadaas u abuurayaan soo celinta midnimadii Somalia ee burburtay 1991-kii. Haddaba, waxaanu uga digayna in ay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasillooni darro ku soo korodha mandaqadda Geeska Africa” ayuu yiri Axmed Siilaanyo.
“Waxaanu Bulshada Caalamka ugu baaqayna in ay si qoto-dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidankaas iyo hubka lagu soo daldalayo dalka Somalia, iyada oo Jamhuuriyadda Somaliland aan illa hadda laga qaadin Xakamaynta hubka ee guud ahaan la saaray dalkii la isku odhan jiray Somali Republic” ayuu sidoo kale yiri Axmed Siilaanyo.
Shir wadatashi ah oo dhamaadkii iyo horraantii bilhii April iyo May ay Garowe ku yeesheen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo 3 maamul goboleed ayaa qodonadii kasoo baxay waxaa ka mid ah in la dhiso ciidan Mideysan.
Isku dhafka ciidanka Soomaaliya iyo mideyntiisa ayaa waxaa loo xil saaray guddi ka koobaan saraakiil, iyo aqoonyahanno, waxaana maalgelinaya dowlado Britain ka mid tahay, iyadoo Somaliland sheegato iney dalkaas la wadaagto saaxiibtinimo gaar ah.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo Kismaayo gaaray
Midowga Yurub oo dagaal ku qaadaya kuwa dadka ka tahriibiya Liibiya